डचटाउनमा भ्यालेन्टाइन डे • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउनमा भ्यालेन्टाइन डे
प्रकाशित फेब्रुअरी 7th, 2021
यस भ्यालेन्टाइन डे, डचटाउन शप गर्नुहोस् र तपाईंको प्रियको लागि केही अनौंठो फेला पार्नुहोस्! साथै, तपाईंसँग हाम्रो छिमेकका व्यापारीहरूबाट ठूलो पुरस्कार जित्न सक्ने अवसरहरू छन्! तपाइँ कसरी जीत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्, र भ्यालेन्टाइनको अघिल्लो दिनमा भइरहेका विशेष घटनाहरूका बारे थप जान्नुहोस्।
फेसबुकमा हामीलाई जोड्नुहोस्
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मा सामेल हुन डचटाउन व्यापार जिल्ला फेसबुक समूह.
हामी यसलाई जित्न सजिलो बनाइरहेका छौं - मात्र सामेल हुनुहोस् डचटाउन व्यापार जिल्ला फेसबुक मा समूह! यो नयाँ समूहमा, तपाईं हाम्रो छिमेकको व्यवसाय मालिकहरू - नयाँ पसलहरू, नयाँ सूची, नयाँ बिक्री, र अधिकबाट पछिल्लोमा रहन सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईले गर्नुपर्ने भनेको फेब्रुअरी ११ सम्ममा फेसबुक समूहमा सामेल हुनुहोस्। फेब्रुअरी १२ मा हामीसँग एक यादृच्छिक रेखाचित्र हुनेछ जसमा धेरै भाग्यशाली अनुयायीहरूले विभिन्न डचटाउन व्यवसायका उपहार सर्टिफिकेटहरू जितेका छन्। विजेताहरूले आफ्नो उपहार प्रमाणपत्रहरू व्यक्तिगत रूपमा लिनु पर्छ। एक डचटाउन शपिंग स्पिडमा जानुहोस्!
भाग लिने व्यापारीहरू
लिगेसी नाई र सौन्दर्य
लोगानका बच्चाहरूको पुन: बिक्री
राखिएको र हेयर सैलून पॉलिश
मारीको स्नैक ह्याक
मेलानिन मेड ब्यूटी
अब र त्यसपछि फेसनहरू
बचत $ #! &
दुई चोटि धन्य पुनर्विक्रण पसल
डचटाउनमा अधिक भ्यालेन्टाइनको रमाईलो
क्रस ग्रान्ड सेल्फी फोटो प्रतियोगिता
क्रस ग्रान्ड, डाउनटाउन डचटाउनको रचनात्मक सेवा एजेन्सी, ठूलो पुरस्कार संग एक रमाईलो प्रतियोगिता छ। तपाईंको स्वीटीको साथ सेल्फी लिनुहोस् र तीन वाक्य प्रेम पत्र लेख्नुहोस्। तपाईंको पत्र र तपाईंको फोटो पेश गर्नुहोस् फेब्रुअरी १२ द्वारा तपाईलाई २० डलरको गिफ्ट सर्टिफिकेट, भरिएको जनावर, चकलेट टोकरी र रक्सीको गुलदस्ता सहित राखिएको बास्केट भेट्न प्रवेश गर्नु हुनेछ। साथै तपाई five० मिनेट जोडीहरु को फोटो सम्पादन को लागी पाँच सम्पादन तस्वीरहरु को साथ प्राप्त गर्नु हुनेछ!
भ्यालेन्टाइन डे पार्टीको लागि होइन
मलाई होइन बुटिक बिर्सनुहोस् 4213२१XNUMX भर्जिनिया एवेन्यूमा प्रेम दिवस मनाउँछ व्यवहार र विशेषको साथ फेब्रुअरी १th मा। शिपिंग गर्ने क्रममा सिप गर्नुहोस् र तपाईंको आत्मालाई माथि राख्नको लागि केही चकलेटहरू आनन्द लिनुहोस्। खरीदारहरूले नि: शुल्क उपहार र्‍यापिंगको फाइदा लिन सक्छन् र off १० छुट जब उनीहरू $ spend० मा खर्च गर्छन्। र एक भाग्यशाली किनमेल गर्नेले उपहार बास्केट जित्दछन् फोरजेट मी नट .. बाट सामान आउनुहोस् बिहान १० देखि साँझ 13 बजेसम्म।
पूर्ण Pastry मा भ्यालेन्टाइन को व्यवहार गर्दछ
पूर्ण रूपमा प्यास्ट्री, मा स्थित शहरी Eats छिमेकी फूड हल, भ्यालेन्टाइन डे को अग्रणी को लागी एक हप्ता भर विशेष व्यवहार गर्दछ। कपकेकहरू, मिनी फल पाइहरू, चकलेटले कभर स्ट्रबेरी, र अधिक खोज्नुहोस्। बिल्कुल पेस्ट्री साढे :7::30० देखि २:०० बुधबार सम्म शुक्रबार र बिहान2देखि साँझ २ बजे सम्म शनिबार र आइतवार खुला हुन्छ।
तल दायर गरिएको कारोबार. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार र डचटाउन. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो फेब्रुअरी 10th, 2021 .
DutchtownSTL.org कारोबार डचटाउनमा भ्यालेन्टाइन डे